Ukusesha Inkampani Inkampani yaseDubai e-United Arab Emirates
Inkampani Dubai - Ukuqashwa kabusha kwe-United Arab Emirates
Ukuqasha Imisebenzi Yokufundisa e Dubai 2019
Imisebenzi eDubai yabasebenzi basePhilippines
[ARForms_popup shortcode_type = 'popup' id = 101 asc = 'Xhumana nathi!' uhlobo = 'fly' isikhundla = 'kwesokunxele' ukuphakama = 'auto' ububanzi = '800' angle = '90' bgcolor = '# ff5100' txtcolor = '# ffffff']
I-Dubai Inkampani e-UAE
Ukuqashwa nokuqashwa kwamathuba e-UAE
Inkampani yaseDubai - Njengamanje sisebenzela izikhala zomsebenzi ezifanayo nezinye izinkampani eMiddle East. Empeleni, sijabule kakhulu uma ungathanda ukujoyina inkampani yethu. Ngasikhathi sinye uma uthanda ukusebenza eDubai. Siyajabula ukwedlula khuluma nawe mayelana nomsebenzi wakho wokusesha e-UAE.
Ngakho kungani ungathola umsebenzi e-Dubai. Nakuba lokhu kungaba yiqiniso singakwazi ukukusiza ngomsebenzi wakho wokufuna e-United Arab Emirates. Futhi ngokususelwa kulokho sinethemba elikhulu lokuthi uzokwazi ukuthola umsebenzi owodwa ngesikhathi. Empeleni wena njengomuntu ofuna umsebenzi uzokwazi ukuhlinzeka ngokuvuselela kabusha okubuyekeziwe kuDubai City Company futhi omunye wabamele bethu uzokwazi ukubuka i-CV yakho. Unalokhu engqondweni kususelwa kulwazi lwakho lomsebenzi. Abanye bethu Ama-agent wokuqasha e-Dubai uzokwazi ukubuyekeza i-CV yakho khona.
Ubani ongasebenzisa i-Dubai City Company?
Siyakwazi ukukunikeza umsebenzi. Ngakho ngaphezu kwenkampani yethu, sisiza abantu abafuna umsebenzi waseNdiya futhi Abafuna umsebenzi wase Pakistani. Ukuze uthole umsebenzi e-United Arab Emirates, iqembu lethu liyakwazi ukuphatha isicelo somsebenzi lalowo nalowo umuntu ozoqokwa e-Asia kanye neMiddle East Market.
Ngakolunye uhlangothi, siyinkampani elinganisiwe e-United Arab Emirates. Siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsiza zokusesha umsebenzi kuzo zonke izikhalazo ezifuna umsebenzi. Ngakolunye uhlangothi, ukusebenzisa inkampani yethu yokuqasha kuyisihluthulelo sabazingeli bomsebenzi. Izikhala zemisebenzi esihlinzeka ngazo yilapho isicelo esisha somsebenzi kuthunyelwa kubaphathi bethu bakwa-HR. Inkampani yethu ibukeza ukhetho ngalunye olutholakalayo. Ngakho kungani siyinkampani ehamba phambili emakethe?. Ngoba sisiza naseSaudi Arabia naseQatar.
Nikeza Amasevisi Wokuseshwa Komsebenzi e-UAE
Ngenhloso yawo wonke umsebenzi wokufuna. Siyakwazi ukukunikeza ngezinsizakalo ezimangazayo e-UAE. Lapho ulayisha i-CV yakho kwiDubai City Company. Ngakho uyi- umqashi womsebenzi futhi ungathanda ukuyibeka e-Dubai. Siyakwazi ukukusiza nganoma uluphi usizo oludingayo. Singemunye wenkampani ehamba phambili emakethe yemisebenzi yase-United Arab Emirate. Ngale nhloso, uthenga enye yezinsizakalo ezinhle ongazicabanga. Okwakho ukufuna umsebenzi ku-UAE. Siyakwazi ukuphatha ukusebenzela umsebenzi kuwe. I-Dubai City Company iyiwebhusayithi emangalisayo lapho ungakhona thola usizo ku-UAE.
Usizo lwe-Legit ngokusesha umsebenzi ne-Dubai Company
I-Dubai City Company, ngakolunye uhlangothi, isiza i-100% ekucwaningweni komsebenzi womuntu ngamunye. Inkampani yethu ukusiza abaphathi abakhulu abavela eNdiya nasePakistan, Qatar, Saudi Arabia kanye neNingizimu Afrika. Ngethemba lokuthi ngamunye wethu ozothola ukhetho uzothola umsebenzi. Kuwo wonke umuntu ozofaka isicelo kwiwebhusayithi. Ngokunaka izinsiza ezinhle kakhulu zomsebenzi zizokwazi ukuxhumana nabaphathi be-HR eDubai. Futhi abaqondisi Bezabasebenzi ku-LinkedIn.
Njengamanje sisiza abafuna umsebenzi bahlanzekile kusuka e-UAE. Ngakho kungani ungahambi ukuthola umsebenzi e Dubai. Izinsizakalo zethu kungenye yezinsizakalo ezinhle kakhulu zokuqashwa kwabezindaba kwezenhlalo yabazingeli bomsebenzi waseNdiya. Sifuna ngaphezulu kwe-270,000 abafuna umsebenzi ku-Facebook. Futhi uqiniseke nge-500000 abazingeli bemisebenzi abavela ku-LinkedIn bahlala becwaninga ngomsebenzi.
Elinye iphuzu elibalulekile ungaba ngomunye walaba abafuna umsebenzi eDubai. Sisiza ekutholeni imisebenzi yobunjiniyela, umsebenzi wokuthengisa, futhi nathi sizama ukukusiza ngemisebenzi ye-CEO. Futhi ngakolunye uhlangothi, nathi sikhona ukusiza abafuna umsebenzi ophethwe iziqu kwi-WhatsApp.
Ukulayisha i-Resume kanye nezinhlelo zokusebenza
Ukufaka i-CV kuzokubiza u- $ 5 kuphela. Ukuze sikhombe ekugcineni sinikezela ngezinsizakalo zokufuna umsebenzi ngaleyo ntengo. Ngakho-ke, ngakolunye uhlangothi, uzothanda ukuqala ukusebenzisa izinsizakalo zethu ungakwenza khona lapho. IDubai City Company nayo enezinsizakalo ze- $ 9,99. Ngaphansi kwalezo zimo, ungathumela isicelo somsebenzi. Futhi uzoba nezinsuku ze-60 isiqinisekiso ekusebenzeni kwakho lapho usebenzisa inkampani yethu.
Ngakho izinsizakalo zokusesha umsebenzi ne-Dubai City Company zitholakala kuwo wonke amadivayisi. Ngokuhamba kwesikhathi, inkampani yethu ingenye yamasevisi ashibhile ukucinga ngomsebenzi e Dubai nase-Abu Dhabi. Njengoba sekuphawuliwe izinsizakalo zethu zenzelwe kuphela abafuna imisebenzi yamazwe omhlaba. Ngaphambili, uma ufuna amathiphu wakamuva eDubai. Ngokuhamba kwesikhathi uzothola eyodwa futhi usendaweni efanele.
Ziningi kakhulu izingosi zemisebenzi ezinjenge-Bayt kanye ne-GulfTalent yokuqasha izingosi. Futhi ngakolunye uhlangothi imisebenzi ku IDubai ingaba isiqhingi sepharadesi. Okwamanje hlola futhi iJobs.com ngempela uNauruki, Iwebhusayithi ye-TCS yomsebenzi. Izingosi zemisebenzi zaseDubai ezivela kuGoogle futhi kuze kube manje zihlola ezona ezinhle kakhulu. Ngakho-ke azikho imisebenzi eminingi yasebhange evulekile e-Dubai endaweni yezomnotho eluhlaza. Imisebenzi yamabhizinisi nokuqashwa kukhule ngokushesha eminyakeni edlule eDubai. Vakashela futhi nezinhlangano zokuqasha eDubai City Company futhi zikuxhumanise nomphathi wakwa-HR ngaphakathi Dubai City.
Thola imisebenzi ku-UAE 2019 futhi uthumela i-CV
Ngenkampani yethu, ungathola indlela yokuthola umsebenzi ku-2019. Ngemuva, senza imizamo ehlukahlukene kanye nezinhlangano ezihlukahlukene. Uzimisele usizo lokusesha abafuna umsebenzi ku-Abu Dhabi nase Dubai. Sisebenzisana nabaningi izinkampani eDubai. Kukhona inzuzo emakethe yamabhizinisi eMpumalanga Ephakathi. Qala ukusesha umsebenzi wakho manje kungabumba umsebenzi wakho okusha nenkampani yaseDubai. Empeleni, abazingeli bezomsebenzi abavela emazweni anjenge India kanye neNingizimu Afrika bayathanda ukubekwa e-UAE.
Ukuyikhangela kahle kuzokufanelekela ku-2019. Futhi kufanele udale iphothifoliyo yokuqalisa kabusha yabaqashi abasha e-UAE. Futhi uthole lowo msebenzi ngokushesha noma ngabe kwenzekani ngendlela yentuthuko yomuntu. Ibanga, amathalente ahlukene eDubai futhi anjalo bonke abafuna umsebenzi e-Emirates. Kukhona isikhathi esiningi lapho ozobhapathizwa behambisa i-CV. Futhi ukuthola umsebenzi omusha. Futhi akukho misebenzi ezohlinzekwa ngemuva kokuthi sibuyekeze i-CV yabo.
Iningi labantu abafuna umsebenzi alazi lapho kufanele ushaye khona nge-CV. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, bheka izinkampani eziqashayo. Indawo yomsebenzi we-Careerjet futhi Iwebhusayithi yokuqasha iGulf. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Indlela yokwenza isicelo sakho somsebenzi?
Sibonile ukuthi kuningi abafuna umsebenzi abanakho okuhlangenwe nakho okwenele. Ngaphambi kokuthi uqale uqaphele ukuthi awunazo iziqu. Okwakho umsebenzi wokuphila futhi incwadi yekhava kufanele icabangele konke okuhlangenwe nakho. Futhi lokhu kufaka phakathi izikole nezinto ezengeziwe ongenazo ku-CV yakho. Kuningi kakhulu abafuna umsebenzi ku-2018 okungenayo ngisho ne-imeyli noma inombolo yocingo ngaphakathi kokuqala. Ngaphambi kokuba uthumele i-CV yakho kumqashi wakho wesikhathi esizayo kufanele uhlole yonke imininingwane onayo. Futhi-ke, konke lokho kudinga ukulungiswa.
Kulungile, ngaso sonke isikhathi uma ubheka i-Resume yakho. Udinga ukusebenzisa isikhathi esiningi nomzamo ukwenza isicelo sakho somsebenzi inguqulo enhle kakhulu ngangokunokwenzeka. Abaphathi banokuqalisa okufanayo nsuku zonke futhi ukubeka abafuna umsebenzi ku-Dubai Companies. Ngakho-ke isekelwe kulowo nalowo muntu oyedwa osebenza ngesimo enkampanini nje akakwazi ukuthola incwadi yomsebenzi.
Ngomsebenzi, ungalayisha ukubuyela kuDubai City Company. Faka i-CV yakho kwabamele bese uzama isibonelo samacala akho. Uvuzwe ukuthola umsebenzi omusha nomsebenzi omusha. Ngoba abaphathi abaqashisayo babezobukeka umkhuba ku-CV yakho. Udinga ukwakha iphothifoliyo enhle kakhulu. Futhi lokho kuzofaka uhla lomsebenzi wakho ekubuyiseleni.
Izikhundla zase Dubai ziyiziningi ezingabathumayo. Kuze kube manje uyafuna amathuba emisebenzi engcono ngezikali eziphezulu zokukhokha. Okwe-Dubai imisebenzi ichaza ukuya lapho uya khona nezindawo ezithuthukiswe kakhulu ezifuna umsebenzi. Uma uthola umsebenzi futhi aqale ukuthuthela eDubai. Ngakho-ke, ngakolunye uhlangothi, kufanele ujabulele isikhathi lapho ufuna umsebenzi. Akunandaba ukuthi kuzokwenzekani ukuthi uhlale uthola ithuba lokuthola umsebenzi wamaphupho eDubai Company. Baningi kakhulu abafuna umsebenzi emhlabeni jikelele ukuthi ungathanda nokuthola umsebenzi ku-UAE.
Abafunayo baseNdiya nabasePakistan e Dubai
Abafuna umsebenzi waseNdiya kanye nabafuna umsebenzi wasePakistan ngifuna impilo entsha etholakalayo e-UAE. Kepha ukukhetha imisebenzi kanye neholo kuncike kulayini womsebenzi. Futhi okuhlangenwe nakho kwakho siqu lapho ungathola amathuba omsebenzi atholakalayo emikhakheni ehlukahlukene. Emisebenzini yokuphatha yangaphambili, imisebenzi yokubalwa kwemisebenzi, imisebenzi ye-IT, imisebenzi yezobunjiniyela, imisebenzi kahulumeni, imisebenzi yakwa-HR, imisebenzi yokungenisa izihambi, imisebenzi yokudayisa, imisebenzi yamakhasimende, imisebenzi yokumaketha, imisebenzi yokufundisa eDubai, imisebenzi yokuthengisa, imisebenzi yokuphatha, imisebenzi yesikhashana, ubunjiniyela abaphezulu. Abaqashi bangathanda ukuzwa kuwe futhi sihlala silindele umbono wakho.
Inkulumo yenkampani yaseDaily Town nsuku zonke emisebenzi yezisebenzi. Ngokuvamile izinkulungwane ezingu-95 zezinkulungwane abafuna umsebenzi nge-Emirate yethu inkampani ivakashela indawo yethu yomsebenzi nsuku zonke. Ngokuyinhloko, unenkululeko yakho yokusebenza eMpumalanga Ephakathi. Wethu ithimba lokuqasha uhlale uthola lowo msebenzi ozolingana nezinhloso zakho zangemuva nendlela yakho yokuphila. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwe-10 yokusiza abafuna umsebenzi njengawe. Abaqashi baseNdiya nabasePakistan abahleli nabo Izinkampani zase Dubai. Futhi yindawo efanelekile yokuthola indlela entsha yempilo yamaphupho.
Wena njengomhloli womsebenzi ungahlala njalo uthole umsebenzi ku-UAE ngisho ne-Google Company. Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwakho i-Dubai City Company inikeza amathuba amangazayo abafuna umsebenzi wase-Asia.
Kungani kufanele usebenzise i-Dubai Company?
Ngokufingqa, ngoba singomunye wabahlinzeki bezemisebenzi ezinhle kakhulu e-Dubai Market. Uma ufuna ukufakwa ne-Dubai City Company ungangeza i-CV yakho kuselula. Kunamasayithi amaningi amahle impela ofanele ukuzama. Ngesikhathi esifanayo kungani uzama inkampani yethu? Ngoba singenye engcono kakhulu kulo msebenzi wamanje nowomuntu siqu ukuthuthukiswa kwephrojekthi yabaphathi eMiddle East.
I-Dubai City ngokuqinisekile ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuthumela. Okuyinhloko Indawo yaseDaily City igcwele abafuna umsebenzi. Unalokhu engqondweni, ungaba ngomunye wabo, uma wenza umsebenzi wakho ngendlela efanele. Okwamanje ku-UAE izindlela ezimbalwa zokuthola izinto ezinhle eziningana. Abafuna imisebenzi abasha balolu suku nezivakashi bezibuza. Indlela enhle yokubekwa eDubai. Iqembu lethu lihamba phambili ukuthola umsebenzi wamazwe ngamazwe ekuphathweni kwehhotela e-UAE.
Siphinde sibe inkampani engcono kakhulu Dubai umhlahlandlela mayelana Amaphoyisa nezomnotho. Emaqenjini ethu, ungathola umsebenzi e-UAE. Xhuma nabaphathi futhi abaqashi base Dubai. Inkampani yethu ehlinzeka ngemisebenzi yokusesha imisebenzi yezindleko zomhlaba jikelele. Manje sisiza abafuduka ezweni lonke. I-Dubai Inkampani ingaba yisihluthulelo ekusesheni kwakho emsebenzini.
Super smart Indlela yokuthola imisebenzi iyinhlangano yokuxoxa. Njenge-expat entsha, kufanele nakanjani ufune lokho. I-Dubai Inkampani ayilinganwanga njenge-no.2 eMpumalanga Ephakathi.
The Izithuba zomsebenzi eziphuthumayo e-Dubai Company
Eqinisweni, kwenye indawo lapho kufanele ufune umsebenzi. Futhi akude kakhulu ne-UAE Izinkampani zaseSaudi Arabia iningi lazo ukuqashelwa ngamazwe ngamazwe. Esinye sezibonelo zayo imisebenzi yemisebenzi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Isibonelo, ungathola izikhala zomsebenzi e-United Arab Emirates. Ngemuva kwalokho ungadluliselwa emisebenzini eQatar noma e-Kuwait noma iDubai iye ePoland.
Ngakolunye uhlangothi, sonke siyakwazi lokho indawo enhle kakhulu yomsebenzi i-Dubai. Uma kwenzeka uzolahlekelwa ngumsebenzi. Ungathola izikhala ezintsha ngokushesha kunamanye amazwe ase-Middle East. Unalokhu engqondweni inkampani yethu ibhala okuningiliziwe okuthunyelwe komsebenzi ngezimo zokusebenza eMiddle East. Kuliqiniso, eminye imisebenzi akulula ukuyifumana. Kepha ziningi izikhala zomsebenzi ezifana ukufundisa izithuba e Dubai. Lapho ungaqashwa khona cishe endaweni.
Ukuthola umsebenzi eMpumalanga Ephakathi. Ikakhulukazi ku Izinkampani zase Dubai eziqashayo kuzothatha isikhathi. Ngaphezu kwalokho nje ukufinyelela abaqashi abafanele e-UAE. Udinga ukuphatha uhlelo lwakho lokuqashwa elisezingeni eliphezulu kakhulu. Akunandaba okwenzayo nokuthi uzokwenza kahle kangakanani. Ukuqalisa kwakho kabusha kumele kube ngenye yezinto ezinhle kakhulu.
Imakethe entsha yomsebenzi yezidingo
Nakuba lokhu kungaba yiqiniso, ukukhuphuka okusha isizwe semisebenzi e-Dubayi yizikhulu zamaPhilippines. Iningi labo livakashela i-Emirates futhi liyayithanda nje. Kukhona imali eningi ezitshaliwe e-Emirates kuze kube yi-2020 Expo. Uhulumeni wase-Abu Dhabi oyizinhloko ezikhuphukayo ukwenza imali eningi kwi-UAE. Ngakho-ke kufanelekile ukuqhubeka ufuna imisebenzi emisha yokuthola ku-UAE. Ikakhulu uma unjalo ne-MBA futhi ifuna umsebenzi e-Dubai. Ochwepheshe abafunde kahle e-Dubai bayamukelwa ngaso sonke isikhathi.
Imakethe entsha yomsebenzi ikhuphukela wonke umuntu. Ngokwesibonelo, Abahambeli e-Dubay for jobs bangabantu baseNingizimu Afrika futhi bathola imisebenzi. Njalo ngesonto kunabantu abasha abafuna umsebenzi abakhulu ukuthuthela e-Dubai. Ngakho-ke uma uvakashela i-UAE kuphela noma ufuna umsebenzi kufanele ufune njalo ithuba elishas. Inkampani Dubai ibheke phambili ekusizeni.
I-Dubai Inkampani kanye nokufunwa kwemisebenzi e-UAE!
Manje sesiqasha imisebenzi e-Dubai nase-Abu Dhabi
Thola UJob e Dubai? ngokumangazayo ungathola lokho. Vele uqale a umsebenzi omusha ku Dubai!
Layisha kabusha Emadolobheni Akhula Ngokushesha Kakhulu Emhlabeni! - Idolobha laseDubai liyindawo enhle emhlabeni wonke, kufanele uzame ukusebenzisa izinkombandlela zethu.